Incazelo smartphone Jinga Hotz M1: ukubuyekezwa abanikazi, izici kanye nezici
Imakethe yeselula njalo kukhona izinqubo okuhloswe ngazo ukwehlisa jikelele ileveli yentengo, futhi bandise amadivaysi atholakalayo. Isibonelo acacile kungenziwa ngokuthi smartphone Jinga Hotz M1. Izibuyekezo okuchaza, bathi imodeli akuyona into engasho lutho, "omunye Chinese". It is endowed benezici eqondene kakhulu kuzoxoxwa ngakho esihlokweni lanamuhla.
Siqala, mhlawumbe, ngendlela linikezwa le model electronics ezimakethe zanamuhla. Libhekisela ngokucacile kuya ekilasini isabelomali, ngoba izindleko salo ruble 9000 kuphela. Njengoba vele sesiyazi, ngoba imali eyodwa sekunzima ukuthola abanye idivayisi ukuma. Nokho, imodeli Jinga Hotz M1 (izibuyekezo ngakho sikulungisele e Etigabeni letilandzelako) refutes lokhu. Naphezu ukugxusha kwesabelomali futhi imishini yezobuchwepheshe, idivayisi kugcinwa ezingeni ehloniphekile.
Qala ukuchaza kudivayisi kungcono ukubheka, ngenxa yalokho libukeka umshini, ungakhuluma mayelana nokuthuthukiswa wawusondela inkinga. Empeleni, uma sihlaziya le ifoni Jinga Hotz M1, ukubuyekezwa uqaphele ukuthi ukuklanywa imodeli libonisa ngokucacile futhi kube nezindleko eziphansi. Lokhu kubonisa izinto ezisetshenziswa kumadivayisi umzimba (ikakhulu, isabelomali plastic) kanye nomhleli jikelele. Ngenxa yalokhu, idivayisi ocime hhayi ukuba imfashini kakhulu futhi eziphambili.
Nokho, ku-Ergonomics yayo wasebenza ngokucacile. Okungenani, kubonakala sengathi abaklami kwalo mkhiqizo bazama ukuwenza kahle ngangokunokwenzeka. Kwezinye izikhathi empeleni kungenzeka: idivayisi, isibonelo, silingana kahle ezandleni zakho, musa bawe futhi musa zinkulu ngesikhathi socingo. Mhlawumbe lokhu kwenzeka lapho udinga ukuhlangabezana hhayi izingubo.
Smartphone has a zakudala izici ezintathu eziyinhloko ukulawula phezu phambi aphansi izindlu ingxenye. Wonke amafoni ivezwa ngezindlela ezahlukene. Somewhere izinkinobho enjalo, isibonelo, bayingxenye kwesikrini, kokuvela njalo futhi anyamalale ngesikhatsi kokuhlinzwa. Lapha, kunalokho, banayo ifomu ngokomzimba. Lokho, umsebenzisi njalo azibona ngayo futhi singathinta, usebenzisa kokubili navigation. Njengoba kuphawuliwe echaza Jinga Hotz M1 (Black) ukubuyekezwa, kulula kakhulu njengoba kukhona ukuqonda ukuba uchofoze kuphi futhi kuzokwenzekani esikhathini esizayo. Nge ashukumisayo uhlelo izinkinobho kulokhu ngokuhlala njalo ngempela amaphutha ezahlukene ezenzeka ngesikhathi ukuxhumana ngedivayisi.
Ngaphezu kwalezi, ungase futhi ngokuthi, okhiye sise onqenqemeni lateral. Kahle kahle, lokhu kuyinto iqoqo zakudala lokulawula ivolumu kanye Ilokhi inkinobho ukukhululwa ibekwe ngakwesokudla futhi ohlangothini lwesobunxele panel, ngokulandelana. Sinenkosi unhlangothi nice snaps agxishiwe.
Okulandelayo Ngithanda uthinte on isihloko isibonisi, ukukhwezwa kuselula Jinga Hotz M1. Izibuyekezo bathi uhlangothi oluhle khona enamathela oleophobic, ngokuvamile ayikwazi ukutholwa onobuhle ekilasini yayo. Ngenxa-ke, kudala ezimnandi ethintekayo ukuzwa: umunwe umba kalula inzwa, ukuthuthukisa umuzwa jikelele nokuxhumana nedivaysi.
Njengoba for the isibonisi kanye izici zayo, ngokuvumelana izincazelo lobuchwepheshe esetshenziswa lapha ngokunemba ubuchwepheshe HD ukucinga indikimba yendaba, futhi module has a isinqumo 720 ngo 1280 Amaphikseli. Sikhishwe MiraVision ubuchwepheshe isicelo lapha, kungenzeka ukuba uqaphele okusezingeni eliphezulu umbala ukunemba kanye saturation isithombe. Lokhu kuba sobala ngokushesha njengoba idivayisi luwele ezandleni. Echaza Jinga Hotz M1 Izibuyekezo sikhunjuzwa ngokuthi lapha isebenzisa esayizini esine-diagonal 5 amasentimitha.
Ucansi lumnandi kusimangaze hlelo ukugcwaliswa, okuyinto isungule unjiniyela. Thina zisetshenziselwa imishini kusuka ngaphakathi umsebenzi isigaba isabelomali, ngokuvamile izizukulwane amadala akwa-Android - iningi version wesine. Ngalesi sikhathi, i-smartphone Jinga Hotz M1 abamnyama (impendulo yomsebenzisi kuqinisekisa plus enkulu-ke) iyasebenza Lollipop 5.1 isizukulwane lesihlanu. Lokhu lula kakhulu umsebenzi nedivaysi. igobolondo sokuqhafaza elisetshenziswe lapha ejwayelekile, kodwa iqoqo izinhlelo is kwahambisana by ezinye izicelo ziwusizo ikakhulu elingase zisuswe kalula lapho oyifunayo.
Yiqiniso, isikhombimsebenzisi sokuqhafaza kubaluleke kakhulu ukusebenza ngedivayisi. Kodwa akukho ezingabalulekile futhi kungenziwa ngokuthi hardware ukugxusha - okungukuthi, processor unesibopho ukusebenza smartphone. Njengoba kuboniswa echaza Jinga Hotz M1 ukubuyekezwa, imodeli has processor 4-core, the MTK, olusekela umsebenzi we simulators ezikhanga kakhulu iyatholakala ku-Google Play. Ngisho izincomo umsebenzisi zisikisela ukuthi ifoni bangajabulela umdlalo e abacibishelayo okucebile yamahhashi ngaphandle hangups. Banikezwe ekilasini zedivayisi, kubalulekile ukuthi ngincome Onjiniyela zayo. Hhayi indima okungenani kule impumelelo, futhi udlala isiqophi namafutha Mali-T720. Njengoba for inkumbulo, it has a umthamo we-1 GB. Yiqiniso, kungase kungabi ngokwanele, uma ugijima besiyoba sikhulu kakhulu isicelo CPU.
Okulindele iyunithi 9000th, oyokwenza izithombe upscale Yiqiniso, akudingekile. Nokho, ukusho ukuthi konke okubi kule imodeli, futhi, akunakwenzeka. Esibonisa smartphone Jinga Hotz M1 Izibuyekezo White bathi izithombe lapha etholakala kahle, kungekho Blur nemibala okungajwayelekile. Mhlawumbe, kwezinye izindawo hhayi ukugcwaliswa ngokwanele, kodwa ngokuvamile idivayisi ubhekana kahle.
Abalandeli isithombe ungakwazi ezifika engqondweni ukuba khona ikhamera flash (-matrix isinqumo, njengoba kuchaziwe, 5 megapixels). Nge kule foni kwalokho ngempela Ungakha izithombe ezinhle kakhulu ngisho nangaphansi kwezimo ongaphakeme ukukhanya. Uma siqhathanisa amakhono imodeli ukuthi unamanye amadivayisi we ekilasini efanayo sesimweni esingcono obungenza Jinga Hotz M1. Izibuyekezo ngaye jikelele omuhle njani izithombe namavidiyo zedivayisi.
Indima ebalulekile incazelo yanoma iyiphi devaysa udlala ukuzimela yayo. Sonke siyazi bona kubuhlungu kangangani ukuthola ukuthi phakathi kosuku elahlekile igajethi yakho ukushaja futhi babe yaphela indaba yalo ngokuphelele. Lokhu kwenzeka uma kungekho nokwenza ukugeleza phakathi Izinga lokushaja futhi umthamo webhethri.
Kulesi sici, Jinga Hotz M1 Blue (ukubuyekezwa, okungenani, kuqinisekiswa), konke kulungile. On idivayisi mikhulu kuqhathaniswa nabanye abameleli sebhetri umugqa smartphone. umthamo Ezazimzungezile - 3000 mah. Njengoba for ukusetshenziswa, unikezwa imodeli elula processor kungenziwa ngokuthi i nezinhlobo eziqinile ezakha isikhathi eside. Ngolunye usuku lonke emsebenzini asebenzayo, ngokuvumelana nezici abasebenzisi, imodeli kumele kwanele nge ohlangothini 20-30%.
Okuningi e Ukubukeza kwethu kungafaneleka ingasaphathwa amamojuli zokuxhumana efakwe kudivayisi Jinga Hotz M1. Njengoba imininingwane yezobuchwepheshe, kukhona isethi eyodwa elikhona kunoma iyiphi enye i-Android-igajethi: umsebenzi ethola LTE-isignali (kuthokozise abalandeli ngesivinini Inthanethi mobile), i-Bluetooth-module, ukwesekwa kwe-WiFi, GPS-navigation system. Futhi ifoni isebenza nge ezimbili-SIM-amakhadi, okwenza kube ezihlukahlukene, ukuvumela ukuba sihlanganise liqhuba opharetha mobile ezahlukene for esiphezulu inzuzo umsebenzisi.
Ngo ukucushwa zalo eziyisisekelo, imodeli ifakwe zonke gigabytes eziyisishiyagalombili yimemori. It - eyakhelwe isitoreji isikhala, okuyinto ingafakwa isicelo futhi, ngomqondo obanzi, noma yiluphi uhlobo lokuqukethwe. Yiqiniso, ivolumu enjalo ngokuvamile iningi akwanele ukuqedela umsebenzi ngefoni, ngakho abakhiqizi abahlinzeke usekelo khadi, okuvumela ukuba bandise isikhala okuqukethwe multimedia lungene 64 GB. Le ndawo iyoba anele ngisho abasebenzisi kakhulu asebenzayo, ulayishe ku igajethi mobile amafayela akho okukhulu kakhulu.
Yiqiniso, isibuyekezo yanoma iyiphi igajethi - kuhle, kodwa into engcono mayelana amathuba yangempela, izinzuzo nezingozi zedivayisi uzokutshela abasebenzisi ukubuyekezwa. Ngakho-ke, phezu izici zethu sikunikeza ukuchaza Google + Jinga Hotz M1. Njengoba singabona kusukela iningi labantu ashiywe nezinhlamvu, nefa eyinhloko imodeli izindleko. Ngentengo ruble 9000 abanikazi abaningi igajethi nje ungalindeli ukuba uthole okuthile okunenzuzo (njengoba sishilo ekuqaleni kwalesi sihloko). Yiqiniso, lo mbono unephutha. Futhi kule foni kuqinisekisa ke.
Ngokuphathelene nezinzuzo ukuthi ukugcizelela idivayisi yangempela abathengi ngalesosikhathi they zihlanganisa ukusebenza high, isikrini ezimibalabala, imishini ezinhle lobuchwepheshe. Kuqhathaniswa nezingozi Akucaci ngakho: zonke amaphuzu Ukubuyekeza amaphutha ahlukahlukene, okwenza kwaba nzima ukwakha uhlobo oluthile okuhilelekile. Ikakhulukazi, umuntu, isibonelo, ungathandi ukukhanya okukhulu kakhulu ivela izinkinobho eziphathekayo. Ukuze uxazulule le nkinga, Nokho, akunzima: kuzilungiselelo lokhu kukhanya kungacinywa.
Esinye isibonelo - esincane RAM. Ngenxa eyodwa-igigabhaythi imodeli ingasebenza nsukuzonke ngaphandle ukubambezeleka yiqhwa, kodwa uma uqala ezinye izinhlelo nzima, kukhona operation engazinzile we processor. Kuyefana nasendleleni ikhamera: abanye kungase kubonakale cool kakhulu, ikakhulukazi imali, okuyinto kuya efonini ephathekayo. Enye umsebenzisi ayeliqamba i izinga engamukeleki lomsebenzi futhi ukuletha salokhu lokususa ngokugqamile. Futhi e ukubuyekeza, ungathola izikhalazo mayelana esithintwayo, okuyinto ayethi uzokwenza ngokungalungile kuthola touch yomnikazi wefoni. Ngenxa yalokhu, kwanele kunzima ukuthola inkinobho ezifanele esibukweni.
Eqinisweni, ifoni kungaba eziningi imicabango yabantu. Nokho, iqiniso liwukuthi ezifana: igajethi has a eziphansi. Kulokhu, ngaphakathi spite of ukutholakala kanye nezindleko aphansi, uyakwazi qualitatively afeze imisebenzi ehlukahlukene. Ngenxa yalokhu, i-imodeli azinake yethu. Ngakho-ke, labo abathanda idivayisi alesi sigaba, ungacabanga ngokuphepha mayelana kokuyithenga.
Indlela ukuhlukanisa a "iPhone" Chinese kakhulu kulokho eqale iyikho. Indlela ukuhlukanisa mbumbulu iPhone 5S
Ziyini izindleko eMelika "iPhone 6"? iPhone 6: Ukubuyekeza intengo
Highscreen Ice 2 smartphone: ukubuyekezwa, izincazelo, Ukucaciswa nokubuyekeza. Smartphone Highscreen ICE 2 - flash 4PDA
Samsung Galaxy Note 2: izici, imiyalelo, izibuyekezo, izithombe. Samsung Galaxy Note 2 N7100
Izindlela ezintathu kanjani kusebenze sim MTS ikhadi
I-mycologist: yini ephulukisayo nokuthi ungayithola kanjani ekamelweni?
Amabili Izinkemba: Inani amakhadi
JSC "Bryansk Automobile Isitshalo"
Kungani amahhotela Bali nakho konke okunye ethandwa kangaka nge izivakashi
Traditional Georgian khachapuri iresiphi kanye noshizi Puff khekhe
Umvuthwandaba: lokho kuyingozi futhi yiziphi izenzo kuqala?
Uma esiqandisini akuyona frost, musa ukusheshe ushayele master
Izimiso inkampani kanye nokuphathwa kwezimali.
Kwaba kanjani ukwakheka Oblomov?